musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » IMEX Buzz Day inobatsira kugadzira vatambi vechimiro
Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • ushanyi • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
IMEX Buzz Zuva
Bhizinesi rezvechiitiko bhizinesi vanogona kudzidza maitiro ekuve vatambi vezvimiro uye vagadzire zvigadzirwa, masevhisi nemishandirapamwe inoenderana nezvinodiwa mune ramangwana paIMEX Buzz Day. Iyo yemahara chaiyo chiitiko ichiitika neChitatu, Gunyana 15, ine ziso rimwe rakasimba pane ramangwana nezvikamu zvepaneru zvinofukidza zviri pamberi penyika yebhizinesi, zviitiko uye tekinoroji.
Virtual zvikamu zvinowongorora zvemberi mafambiro & kuendesa mukati mekutenderera pane IMEX America
Muvambi weNew World Same Humans uye anotungamira wevatarisiri, David Mattin, achatungamira ramangwana rinotarisana nezvikamu zveZuva reBuzz.
Achagovana akakosha maitiro akaiswazve kugadzirisa hunhu uye zvinotarisirwa makore gumi aya.
Iyo ramangwana tekinoroji zvakare ichave stellar mutsara-up wevemaindasitiri nyanzvi vachigovana maonero pane izvo remangwana rakabata kune zviitiko indasitiri.
Yekupedzisira mune akateedzana eBuzz Mazuva pane IMEX BuzzHub yakagadzirirwawo kuti ipe rwiyo rwekunze pane yegumi edition yeIMEX America munaNovember, zvichibatsira vatori vechikamu kuronga kwavo chiitiko chekuratidzira, vachitungamirwa neboka reIMEX.
Nyika Itsva, Vanhu Vakangofanana, Zvirongwa zvakasiyana zvinotarisana neramangwana
Mutungamiri anotungamira muoni David Mattin, muvambi weNew World Same Humans, anotungamira ramangwana rinotarisana nezvikamu zveZuva reBuzz. Nharaunda yake yevanopfuura zviuru gumi nemana "mweya inoda kuziva" yakatsaurirwa kuchinjana maonero nezveramangwana rezvinhu, tekinoroji, uye nzanga. David achagovana akakosha maitiro akaiswazve kugadzirisa hunhu uye zvinotarisirwa makore gumi aya pamwe nemazano anoshanda ekuziva izvo zviri kukona nekuzvishandisa pakuronga bhizinesi.
David Mattin, muvambi weNew World Same People
Mune chimwe chikamu,Nguva Yemberi yeTekinoroji inoongororwa nenyanzvi kuseri kweKumhanya iyo Nyika, Swapcard, Cvent uye ChiitikoMB. IMEX Boka CEO Carina Bauer akabatanidzwa neiyo stellar mutsara-up weindasitiri nyanzvi kugovana maonero pa Chii icho ramangwana rakabata kune indasitiri yezviitiko? Kubatana naCarina papaneru ichave Nicola Kastner, VP, Global Musoro weChiitiko Kushambadzira Strategic, SAP; Colja Dams, Muridzi, Vok Madhamu; uye Mike Dominguez, Mutungamiri uye CEO, ALHI.
Iyo nzira inoenda kuMandalay Bay
Mune akateedzana e "Ndibvunze chero chinhu" zvikamu, vatori vechikamu vanokokwa kuti (vangangoita) kusangana neIMEX timu iyo ichapa irimukati nzira pane gadziriro yemutambo. Iyo Yakagamuchirwa Mutengi timu ichagovana matipi anoshanda kubatsira avo vatsva ku iyo IMEX chiitiko kuzadzisa rakanakisa bhizinesi kukosha - uye kunonyanyisa kunakidzwa! - kubva pakuratidzira. Vachaunzawo vatori vechikamu kuimba itsva yeIMEX America, Mandalay Bay.
IMEX's Operations zvikwata zvichagovana ruzivo rwechiitiko chekuratidzira, kubva pamasikirwo kusvika kuhutano uye matanho ezvekuchengetedza uye neruzivo rwezvinhu zvakakosha. Ivo vanozo tsanangudza maitiro avari kugadzira iyo show yakachengeteka asi isiri chena, zvinoenderana neazvino kuchengetedzeka zvinodiwa.
Pakupedzisira, Ndibvunze chero chinhu nezve chii chiri paIMEX America uye chii chausingapotse! inoona timu yeZivo ichigovana zvazvino zvichangoburwa pachirongwa chinokurudzira mutauri, zvirongwa zvitsva zvekuratidzira uye zviitiko zvekunakidzwa zveLas Vegas.
Carina Bauer, CEO weImEX Group, anotsanangura kuti: “Kufungidzira uye kupindura mune ramangwana bhizinesi dzimwe nguva kungave kwakaoma, asi zvinogara zvichikosha. Yedu inonakidza renji yenyanzvi ine laser inotarisa pane ramangwana uye inogona kugovana nzwisiso mune zviitiko zvakagadzirirwa kuumba nyika yedu.
“IMEX America ichitamba muna Mbudzi, tave munzira yakasimba yekuMandalay Bay. Yedu yekupedzisira IMEX Buzz Day yakagadzirirwa kugadzira nzira, kuunza zviitiko zvebhizimusi munharaunda kune vanhu vanoshanda kuseri kwechiratidzo kugadzira show yakachengeteka, izere nemikana yekudzidza uye yakagadzirirwa kuendesa kukosha kwechokwadi kwebhizinesi. "
Iyo IMEX BuzzHub chikuva inoitika munaGunyana 15, ichiendesa kubatana kwevanhu, kukosha kwebhizinesi uye zvakagadzirirwa zvirimo pane "Mugwagwa unoenda kuMandalay Bay" mukumhanyisa kusvika IMEX America, Mbudzi 9-11, uye Smart Muvhuro, inofambiswa neMPI munaNovember 8. .
Kunyoresa kweBuzzHub mahara.